ဝိပဿနာ သုံးမျိုး	Posted on October 25, 2009	by mettayate ၀ိပဿနာ ၃ မျိုး
၁) သမထပုဗ္ဗင်္ဂမ ၀ိပဿနာယာနိယနည်း – သမမထ ရှေ့သွားရှိသော ၀ိပဿနာနည်းလို့ ခေါ်တယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်း ၄၀ ထဲက တစ်ခုခုပွားတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အာနာပါန သမထ ကို အသုံးများတယ်။ အဲ့လိုပွားရင် သမထ ၂မျိုး ရတယ် – ဥပစာရသမာဓိ လို့ခေါ်တဲ့ ဈာန်အနီးအနားမှာဖြစ်တဲ့ သမာဓိ၊ နှင့် အပ္ပနာသမာဓိ လို့ခေါ်တဲ့ ပဋ္ဌမဈာန်ကနေ စတုတ္တဈာန်ထိ ဈာန်တစ်မျိုးမျိုးကို ရသွားတဲ့ သမာဓိ။ အဲ့ဒီလိုရသွားတဲ့အခါမှ ခန္ဓာငါးပါး ၀ိပဿနာကို ရှုပွားတာပါ။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← တရားနာပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုး